"सुबारु वनपाल" (2007): विनिर्देशों र मालिकको समीक्षा
डिसेम्बर 2007 मा, कार सुबारु वनपाल को तेस्रो पुस्ता जापान मा भएको थियो। एक क्रसओभर को दुनिया प्रीमियर प्रारम्भिक 2008 मा डेट्रोइट मा स्थान लियो। 2010 मा यो डिजाइन र प्राविधिक उपकरण को समायोजन केही समावेश जो एक restyled मोडेल, आयोजित। जस्तै, को "सुबारु वनपाल" (2007) नयाँ पुस्ता सम्म, 2013 सम्म बेचिएको थियो। मिति गर्न, सडक अक्सर जापानी क्रसओभर तेस्रो पुस्ता फेला परेन। उहाँले अझै पनि माध्यमिक बजार मा राम्रो तरिकाले बेच्छ। आज हामी तपाईंलाई थाहा यस कार र के यो एक विस्तृत दर्शक पाउन व्यवस्थित छ चाखलाग्दो कुरा हो कि।
"सुबारु वनपाल" (2007) एक manly समयमा मोडेल पूरै क्रसओभर फैशन अनुरूप छ कि हेर्न पाए। उहाँले दोस्रो पुस्ता फरक छ जो क्रूरता को एक शेयर, ब्रान्ड उत्साही को indignation चासो जगायो जो गुमाए। तर, यस्तो उपाय पूर्णतया बजार आवश्यकताहरू जायज छन्। तिनीहरूले महिला र परिवार दर्शक "सुबारु वनपाल" (2007) को लागि खोल्न अनुमति छन्। फोटो मिसिन सुरिलो अनुपात, राम्रो अगाडि र Monumental को फिर्ता द्वारा विशेषता छ भनेर देखाउँछ। मेशिन छेउमा करङहरु, Profiled पाङ्ग्रा arches साथ गतिशील ड्राइभिङ लागि यसको penchant जोड।
"सुबारु वनपाल" (2007) आयाम छ: लम्बाइ - 4560 मिमी, चौडाइ - 1780 मिमी उचाइ - 1700 मिमी। कार को पाङ्ग्रा आधार 2615 मिमी छ र जमीन अवकास 215 मिमी ठोस लादेन छ।
हाम्रो नायक को भित्री एक बरु prosaic र austere फारम तीन-बोले multifunction स्टेरिड़, optitronnaya ड्यासबोर्ड, सरल र सुविधाजनक मा-बोर्ड कम्प्युटर केन्द्रीय कन्सोल भएको रेडियो र दोहरी-क्षेत्र जलवायु नियन्त्रण छ। भित्री सरल देखिन्छ, तर यो धेरै सहज र Ergonomic छ। सबै तपाईं त्यहाँ एउटा सहज सवारी लागि आवश्यक छ। Abholstery कठोर प्लास्टिक को inexpensively ज्यादातर गठन, तर आन्तरिक भागहरु को विधानसभा गुणस्तर एक उच्च तहमा वास्तवमा छ।
भित्र, "सुबारु वनपाल" (2007), पाँच मान्छे हुनेछ अझै चार समायोजित गर्न सकिन्छ, तर थप सहज। अगाडि र पछाडि पङ्क्ति रूपमा पर्याप्त ठाउँ छ। सिट सुविधाजनक कन्फिगरेसन र लामो यात्राको समयमा सान्त्वना प्रदान गर्नुहोस्। ठीक छ, अगाडि सिट कुनै पनि आकार समायोजन गर्न तयार छन्।
450 लिटर, क्षेत्र को लागि एक तथ्याङ्क औसत छ - कार्गो अन्तरिक्ष क्रसओभर एकदम सभ्य रकम छ। यो एक पटक फेरि मिसिन परिवार मान्छे को लागि उपयुक्त छ भनेर पुष्टि गर्छ। तपाईं पछिल्लो सिट गुना भने, लोड खण्ड मात्रा 1660 लिटर गर्न वृद्धि हुनेछ। कार को खडा तल्ला अन्तर्गत पूर्ण आकार स्पेयर टायर छ। कार ज्योति, र माध्यमिक सडक जित्न, र यो धेरै असुविधाजनक हुनेछ तोडने को मामला मा ती ठाउँहरूमा "dokatka" बाट फिर्ता आउन सक्षम छ किनभने यो धेरै राम्रो छ।
"सुबारु वनपाल" (2007): निर्दिष्टीकरण
हाम्रो बजार, कार सिलिन्डरहरु तेर्सो-विरोध तरिका प्रबन्ध छन् जसमा चार पेट्रोल 4-सिलेंडर इन्जिन उपलब्ध थियो। ती दुई वायुमण्डलीय छन्, र दुई - टर्बो।
पूर्व 150 लिटर क्षमता संग 2-लीटर इन्जिन समावेश गर्नुहोस्। एक। र 198 एनएम र 2.5-लीटर इन्जिन, 172 घोडा शक्ति एक शक्ति र क्षण को एक टोक - 225 एनएम।
राम्रो र दोस्रो गर्न - दुई 2.5 लीटर इन्जिन 230 एल उत्पन्न। एक। र 320 एनएम वा 263 लिटर। एक। र 347 एनएम।
"वनपाल" को तेस्रो पुस्तालाई प्रसारण त्यहाँ स्वचालित 5-गति मा तीन मेकानिक्स वा45 वा गति थिए।
मोडेल मा MKMM संग viscous युग्मन प्रयोग अंतर ताला संग चार पाङ्ग्रा ड्राइव स्थापित। मानक अवस्थामा, समय 50:50 को एक अनुपात मा अक्षहरूमा बीच साझेदारी। 80% thrust गर्न आवश्यक भएमा, इच्छित अक्ष धारण गर्न सकिन्छ।
सुसज्जित इलेक्ट्रनिक्स विषय हो जो बहु-प्लेट क्लच, संग स्वचालित प्रसारण संग "वनपाल"। अगाडि र पछाडिको धुरों बीच सम्भावित बराबर 60:40 छन्। को पाङ्ग्रा पर्ची गर्न सुरु बीच परिवर्तन यातायात अवस्था प्रतिक्रिया सक्रिय पाङ्ग्रा ड्राइव सिस्टम, समय redistribute गर्न सक्नुहुन्छ।
मेशिन गियरबक्सलाई र इन्जिन, "सुबारु वनपाल" (2007) लायक छ के आधारमा 6.5 देखि 10.7 सेकेन्ड 100 मी / घन्टा प्रवेग बिताउनुहुन्छ। कि क्रसओभर लागि राम्रो कुरा हो। कार जित्न सक्छौं कि अधिकतम गति, फेरि आधारमा tandem मा - को 185-228 मी / घन्टा "इन्जिन प्रसारण"। खैर, संयुक्त मोडमा इन्धन खपत दायरामा 8,1-10,5 छ।
"सुबारु वनपाल" एक मंच को सुबारु Impreza मोडेल देखि उधारो मा 2007 मा बनाइएको थियो। यसलाई समावेश McPherson निलम्बन बहु-लिंक अगाडि र पछाडिको मा। को स्टेरिड़ समग्र मिसिन रूपमा व्यवस्थापन गर्न बिट सजिलो छ जो एक बिजुली, छ। दुवै कार को अगाडि र पछाडिको डिस्क ब्रेक छन्। तिनीहरूको अगाडि ventilated र फिर्ता मा - सरल।
शहरमा कार ड्राइभ धेरै सहज छ। कारण उच्च अवतरण गर्न, तपाईँले सजिलै आफ्नो आकार र दर्पण को असामान्य आकार अन्धो स्थलहरू को एक न्यूनतम संग उत्कृष्ट दृश्यात्मक सिर्जना महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो समीक्षा पनि उच्च ग्लास लाइन योगदान पुग्छ।
बाटोमा कार धेरै manoeuvrable छ। एक सानो बदल पार्क र तंग रिक्त स्थान मा वरिपरि बारी superfluous नसाहरू बिना, यो सम्भव बनाउँछ। "वनपाल-3" पनि राम्रो ह्यान्डलिङ दावा: कुनै अतिरिक्त रोल यो एक सभ्य गति मा तेज पालैपालो प्रवेश गर्छ। यस मामला मा, निलम्बन पनि तंग बन्न छैन, यो सामान्य हो, डामर जोडों र सानातिना अनियमितताहरु "ingests"। को स्टेरिड़ देखि प्रतिक्रिया उहाँले एकदम सजिलै उत्तेजित गर्दछ गर्दा विशेष गरी कम गति मा, एक सानो अभाव। ब्रेकिंग, पनि, कार crossovers पर्छ र मात्र होइन बाटोमा तर पनि बाक्लो शहर यातायात मा सवारी सुझाव दिने विशेष गरी विचार चाहेको गर्न, धेरै छोड्छ। तर ग्याँस पेडल, त्यसको विपरीत, धेरै तेज छ। मेसिनमा Unaccustomed सजिलै सार्न काम गर्दैन।
क्रसओभर कार लागि एकदम राम्रो बाटोमा गऱ्यौ। उहाँले निर्धक्क बालुवा, माटो र हिउँ मा जान्छ। तसर्थ, शहर बाहिर एक यात्रा यो केवल सकारात्मक छाप हुनेछ। र धेरै सहज मौज र "जापानी" मा एक आरामदायक कुर्सी धन्यवाद सुरक्षित लामो दूरी भन्दा पठाइन्छ।
"सुबारु वनपाल" (2007) मालिकको समीक्षाएँ
समीक्षा रूपमा, सम्पूर्ण मिसिन नै खराब छैन सिद्ध भएको छ, तर त्यहाँ अप्रिय कमियां छन्। तिनीहरूमध्ये बाहिर खडा:
- कमजोर soundproofing र rattling प्लास्टिक।
- शारीरिक पातलो तह (खरोंच शाखा रहने) संग चित्रित।
- शरीर (पहिले नै खराब बन्द छ curb सानो ट्रंक मा एक पाङ्ग्रा चलिरहेको मा) कठिन रूपमा निर्माता द्वारा यसो छैन।
- कमजोर ब्रेक।
माध्यमिक बजार, "वनपाल" तेस्रो जेनेरेसन हजार 500 एक लाख गर्न rubles को एक औसत लागत। यो सबै मिसिन र उपकरण अवस्था मा निर्भर गर्दछ। यो क्रसओभर को पनि आधारभूत संस्करण अगाडि र पक्ष airbags, ABS, ESP, जलवायु र क्रूज नियन्त्रण, बिजुली प्याकेज, गरम अगाडि सिट, अडियो सिस्टम र इस्पात पाङ्ग्रा छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैले, हामी जापानी क्रसओभर तेस्रो पुस्ता भेटे, र हामी यो उद्देश्य निष्कर्ष बारेमा के गर्न सक्नुहुन्छ। "वनपाल" को यो पुस्ता आफ्नो predecessors भन्दा कम क्रूर बन्द-सडक उपस्थिति प्राप्त गरेको छ, तर "प्राण", यो नै रहनेछ। एक सभ्य नजर बन्ने, कार नै महिला दर्शक गर्न खोलिएको, र एक परिवार कार जस्तै भयो छ। मेशिन, राम्रो उपस्थिति छ तरिकाले यात्रा र "बुद्धिमान" सडक आँधी गर्न सक्नुहुन्छ। सारा परिवार को लागि एक सार्वभौमिक कार किन्न चाहने ती लागि राम्रो "सुबारु वनपाल" (2007) छ। समीक्षा मालिकहरूले मिसिन ध्यान लायकको छ भनेर पुष्टि।
आफ्नो हातले Tinted ग्लास कार: सिफारिसहरू
"रेनउल्ट-Duster": पासपोर्ट र वास्तविकता मा इन्धन प्रति 100 मी खपत
थप लगानी बिना इन्धन खपत कम गर्न कसरी केही सुझावहरू
Boge शक: वर्णन, प्रकार र विशेषताहरु
इंजेक्टर वा कार्बोरेटर? जो राम्रो छ?
एक पुरुष वृष संग व्यवहार कसरी केही सुझावहरू
Pyrethrum पाउडर र यसको गुण
एक पाल्तु जनावर रूपमा इन्द्रेणी केकडा
एक उत्कृष्ट र लोकप्रिय "Gloriya Dzhins" टुला मा
को गर्मी को सबै भन्दा राम्रो हितोपदेश: लोक र आधुनिक
युरी पपोव र शरीरको निको गर्ने तरिका